ကိုယ့်ခြေပေါ်ကိုယ်ရပ်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
လွတ်လပ်ခြင်း “Freedom” နဲ့ လွတ်လပ်ရေး “Independence” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ အဓိပ္ပါယ်ကွာခြားပြီး လွတ်လပ်ရုံမျှနဲ့ လွတ်လပ်ရေးရပြီလို့ မဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်း၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်မှ လွတ်လပ်ရေးရတယ်လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၄ရက်နေ့တွင် ကျရောက်တဲ့ ၆၅ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေပုံ
Photo: RFA/Sai Tun Aung Lwin
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ ၆၅ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူတဦးချင်းစီအလိုက် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် မတ်တပ်မရပ်နိုင်ဘဲ သူတပါးကိုသာ မှီခိုနေရတယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်ရေးရတယ်လို့ မခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံအလိုက် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ရာမှာလည်း ဘယ်နိုင်ငံက လာကူညီမလဲလို့ မျှော်လင့်နေရမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ မျှော်လင့်ချက်ကို အလုပ်နဲ့အကောင်အထည်ဖော်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီလို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာလည်း ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး အဓိကလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ (၆၅) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတွေကို ရန်ကုန်မြို့အပြင် မန္တလေး၊ မြစ်ကြီးနားနဲ့ ကော့သောင်းမြို့တွေက NLDအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွေမှာလဲ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ မိန့်ခွန်းထဲက ထူးခြားချက်များကို ဒေါ်ခင်ခင်အ်ိက တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
No one in the world can survive alone. Everybody are interdependent on each other. As long as we do our part completely should be alright.
we need to respect each other, and we have learned about what is respect means? respect each other is very important in democracy, there is saying that your stick you waive don't hit me , haveapeace and develop MYANMAR in 2013
Jan 05, 2013 05:46 AM
ကချင်အရေး လေးလည်း ပြောပါဦး။ ဒီလိုပဲ မနေလိုက်ပါနဲ့။
Jan 05, 2013 03:40 AM
တိုင်းတစ်ပါးစီကအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုမိမိနိုင်ငံသားကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရအောင်ပြန် လုပ်တာကိုတော်လှန်ရေးလို့ခေါ်လို့ရတယ်။မိမိနိုင်ငံသားအုပ်ချုပ်ခွင့်ရသွားတိုင်းလွတ်လပ်ရေးရပြီမထင်ပါနဲ့။အယောင်ဆောင်လွတ်လပ် ရေးဘဲရတာပါ။တကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူပြည်သားတွေမလွတ်လပ်သေးပါဘူး။
Jan 05, 2013 02:07 AM
Respect each other. Love each other.Think for other ethnic groups and their rights.If you all agree , accept and are aware of that point of view, you all can seeabeautiful meaning of the words " Independence and Freedom" for Myanmar. KNU,KIA,......etc.. are fighting for their rights,freedom and independence. Is it right or wrong ? Please get the agreement for that meaning.
Jan 04, 2013 09:15 PM